अरुण भ्यालीको अवितरित हकप्रद आजबाट लिलामीमा, कहाँबाट दिने आवेदन ? - Arthasansar
अरुण भ्यालीको अवितरित हकप्रद आजबाट लिलामीमा, कहाँबाट दिने आवेदन ?
बुधबार, ०९ असार २०७८, १० : ५३ मा प्रकाशित
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आज (असार ९ गते, बुधबार) बाट सेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेकाे छ ।
कम्पनीले कम्पनीले वैशाख ६ गतेदेखि जेठ २ गतेसम्म निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहको ४ लाख ३५ हजार ८ सय ९४ कित्ता हकप्रद सेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेकाे हाे । उक्त सेयरमा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसस्थाले असार १६ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।
उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिसेयर एक सय रूपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले न्युनतम १०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा सम्पूर्ण सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी, उक्त सेयरको बिक्री प्रबन्धकको काम मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले गरेकाे छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी–काठमाडौं, मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा कार्यालयहरु भक्तपुर–ठिमी, कुमारीपाटी–ललितपुर, इटहरी–इलाम, पोखरा–नागढुंगा, नारायणगढ, सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढी, जनकपुर तथा अरुण भ्यालीको कार्यालय थापाथली, काठमाडौंबाट पनि बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।